Ngubani ophethe ioyile yakho? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 16, 2009 NgoMvulo, Novemba 4, 2013 Douglas Karr
Yonke imini-yonke imihla-abantu bandithumela i-imeyile, bandithumele imiyalezo, bandityelele i-twitter, bandityelele, banditsalele umnxeba kunye nemiyalezo yangoko ndinemibuzo malunga nemimandla, amandla, i-CSS, ukhuphiswano, amagama aphambili, imicimbi yabathengi, indawo yokuthengisa, iindlela zokuthengisa, ukubhloga, Imidiya yokuncokola, njl. Ndifumana izimemo zokuthetha, ukubhala, ukunceda, ukudibana ... Iintsuku zam zixakekile kwaye zifezekisa ngokumangalisayo. Andiyongqondi kodwa ndinamava amaninzi kwaye abantu bayayiqonda. Ndiyakuthanda nokunceda.
Umceli mngeni yindlela yokusebenzisa ixabiso kuyo yonke le micimbi mincinci kunye namathuba. Umbono wam kukuba luhlobo olunjengemihla yakudala apho ioyile yayigcina iivili zoololiwe zifakwe ioyile ukuze ihambe ngokukhawuleza kwaye ibelula ezantsi. Susa ioyile kunye nokuma koololiwe. I-oiler iyazi ukuba kuphi, nini, kutheni kwaye ingakanani. Ndivakalelwa ngathi yi-oiler-kodwa kwinqanaba elibanzi kakhulu. Imibuzo ebuzwe kum ifuna ubuchule kunye namava endiwakhileyo kule minyaka ingama-2 idlulileyo.
Kunzima ukuxabisa okanye ukukhumbula ioyile xa uloliwe eqengqeleka ezantsi, kodwa. Uloliwe, amalahle, umqhubi, umkhondo… zonke iindleko 'zinkulu' kunye nezisombululo 'ezinkulu' ezinokulinganiswa ngokuchanekileyo. Ukuba yi-oiler ayisiyonto ilula. Ndiyazi ukuba uloliwe uhamba ngokukhawuleza okukhulu kunokuba ngekunje ukuba bendingathambisanga iitreyini - kodwa ayikho indlela eqinisekileyo yokulinganisa ifuthe kwinqanaba legranular.
Awunayo ioyile? Ungazithenga ezo zixhobo kwenye indawo okanye wenze uphando ngokwakho. Yongeza nje ixesha, indleko, umngcipheko kwaye inokunciphisa umgangatho wenkonzo obonelela ngayo abathengi bakho. Kuya kufuneka ube ne-oiler-wonke umbutho kufuneka.
Oku akwenzi Isandi Ndithobekile, kodwa kweyam tho bekile uluvo, ndiyakholelwa ukuba iinkokheli ezinkulu zihlala zikhona ioyile. Basebenza nzima yonke imihla ukususa imiqobo ukuze abo babangqongileyo batyhale nzima, babaleke ngokukhawuleza, kwaye baphumelele. Amaqela ayayithanda ioyile kuba angazisebenzisa ukuze aphumelele. Umbuzo ngowokuba ingaba i-oiler ifumana ukwamkelwa kufanelekile okanye iyaqondwa ngexabiso elinikiweyo.
Kwenzeka ntoni xa kubuzwa ixabiso lakho?
Ngaba uyayeka ukuthoba ioyile kwaye ubeke uloliwe emngciphekweni kunye nokwakha ingqumbo nabanye abasebenzi abathembele kuwe? Ngaba endaweni yoko ulandela iiprojekthi ezizukileyo kunye namathuba apho ixabiso lakho lilinganisiwe kwaye liqondwa ngokupheleleyo?
Okanye… unamathela kwinto oyithandayo? Ungaqhuba impumelelo yenkampani yakho - kodwa umngcipheko kukuba abanye bangayiqondi, bayazi indlela yokulinganisa, bayayixabisa… kwaye baya kuyibuza rhoqo. Kweli lizwe ledatha kunye nohlalutyo, ukuba awukwazi ukuphendula ukuba liphi ixabiso lakho kumbutho onokuba sengxakini.
Ungowoyili? Ngaba unayo ioyile emsebenzini? Ngubani ophethe ioyile yakho?
tags: abasebenzioyile inako
Jan 17, 2009 kwi-12: 16 AM
Indlela enomdla kakhulu ngombono we "Oiler" kunye ne-IMHO, ulungile kwithagethi. Ngeentsuku zam zokulawula, ndithathe indlela eyahlukileyo yokucebisa abaphathi bam malunga nokuphatha kwaye namhlanje kwiiklasi zam zolawulo ndixelela abafundi bam ukuba umsebenzi womphathi: ”kukubonelela ngendawo apho abasebenzi banokuphumelela khona” Le yenye yeendlela ebaxelela ukuba banoxanduva lokuba ngabathetheli beoyile "kwiitinmen" okanye kubasebenzi babo kwaye ayingoololiwe okanye umbutho.
Ndiyasithanda isikweko kwaye ndiza kusisebenzisa kwixesha elizayo. Enkosi ngeposi
Jan 17, 2009 kwi-12: 22 AM
Enkosi SBM! Wazise amazwi anobubele!
Uliqala njani ishishini eMzantsi Carolina
Jan 18, 2009 kwi-11: 15 AM
Isikweko sikhulu. Yonke ingqwalaselo kwiinkcukacha kufuneka ijolise kuyo.
Jan 18, 2009 ngo-10: 56 PM
Enkosi ngokusoloko ndithatha ixesha lokuphendula imibuzo yam. Ubungcali bakho kunye nokuzimisela ukunceda kundigcinele iiyure zokukhangela kunye nokudana.